श्रम सम्झौता नगरेसम्म खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदार पठाउन हुँदैन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← पहिलो खेलमा नेपालको सानदार जित
महिलाले शव बोकी घाटसम्म पुर्‍याउँदा… →
श्रम सम्झौता नगरेसम्म खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदार पठाउन हुँदैन
Posted on 10/11/2014 by डम्बर 'माइला' | टिप्पणी छोड्नुहोस्
धर्मराज गिरी, अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ, कुवेत
सोमवार, २०७१ कार्तिक २३ गते ००:३३खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदार पठाउन अहिले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । खाडीमा रहेका महिलाहरुमाथि यौनशोषण र हिंसा बढ्न थालेपछि पछिल्लो समयमा सरकारले रोक्का गरेको हो । एजेण्ट वा दलालको भरमा परेर आँखै चिम्लेर नेपाली महलिाहरु खाडी जाँदा समस्या दिनानुदिन बढेको हो । दुई देशवीच श्रम सम्झौता हुन नसक्दा खाडीमा रहेको कानूनले घरेलु कामदारलाई नहेर्ने हुँदा कुनै समाधान निकाल्न नसकिएले श्रम सम्झौता नगरेसम्म बन्द गर्नुको बिकल्प नरहेको भन्दै एनआरएन कुबेतले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्ताक्षर नै बुझायो । खाडीमा महिलालाई त्यक्तिकै जान दिने हो भने समस्याले विकरालरुप लिन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्नलाई दिनरात लागिरहने एनआरएन कुवेतका अध्यक्ष धर्मराज गिरी यतिबेला नेपाल आएका छन् । उनीसँग खाडीमा रहेका महिलाको अवस्था,समाधानको उपाय र एनआरएनले चालेका कदमका विषयमा कुराकानी गरेका छौ ।
खाडीमा महिला कामदारको अवस्था धेरै नराम्रो भएको सुनिन्छ, वास्तवमा कुवेतमा रहेका महिलाको अवस्था कस्तो छ ?– कुवेतमा हामी एक लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छौं । ४० हजार जति घरेलु कामदारका रुपमा छन् । बाँकी विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत छन् । त्यस मध्ये ३५ देखि ३८ हजार महिलाको संख्या रहेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काम गर्न कुवेतमा राम्रो वातावरण छ । अरु देशको तुलनामा कानून कडा रहेकोले सुरक्षा पनि राम्रो छ । २ सय ५० जना दूतावासको उद्धार शिविरमा राखिएका छन् । ५ हजार जना हस्पिटलमा छन् भने आठ हजारको हाराहारीमा जेलमा रहेका छन् । ती मध्ये अधिकांश महिला रहेका छन् ।
भनेपछि कानूनी प्रकृया नपु-याउने महिला कामदारको अवस्था चै दयनीय नै छ ?
– हो, करिब ३५ हजारको संख्यामा महिला कामदार रहेका छन् । कुवेतमा घरेलु कामदार नेपाली महिलाको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक र पीडादायी छ । नेपाल–कुवेत सरकारबीच महिला घरेलु कामदारको हकमा कानून बमोजिम कुनै सम्झौता नै छैन । घरेलु कामदारका लागि श्रम अनुमति हुँदैन । नेपाली महिला भारतीय बाटो हुँदै गैरकानूनी रुपमा घरेलु कामदारको लागि कुवेत पुगेका छन् । त्यहाँ महिलाले भोगेको यातना र पीडाका कारण गल्फमा नै विगत चार महिनादेखि नेपाली महिलालाई रोजगारीका लागि जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर अझै पनि भारतीय बाटोबाट दलालको फन्दामा परेर महिलाहरु जाने क्रम रोकिएको छैन ।
कस्तो प्रकारको पीडा र दर्दनाक अवस्था छ त महिलाको त्यहाँ ?
– घरेलु कामदारको रुपमा रहने नेपाली महिला मध्ये ९५ प्रतिशत घर मालिक र परिवारकै सदस्यबाट यौन शोषणमा पर्दै आएका छन् । तोकिएको बेला कतिपयले तलब पाएका छैनन् । पाँच बर्षदेखि तलब नपाएका महिला पनि भेटेका छौं हामीले । खान लगाउन राम्रो पाएका छैनन् । तोकिएको कामको अवधि पूरा भएपछि घर फर्कन नपाउने, कुनै दिनपनि छुट्टि नपाउने, आफन्त र साथीभाई पनि भेट्न नपाउने अवस्था छ । महिला हिंसाको अवस्था दर्दनाक छ । आफूले भने अनुसार नमान्ने महिलालाई आइरनले डाम्ने, छतबाट तल झार्ने, रड र धारिलो हतियारले प्रहार गर्ने जस्ता घटना दिनहुँ दोहोरिरहन्छन् । अहिले कुवेतका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका करिब ५ हजार नेपाली मध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी महिला त्यसमा पनि हिंसा पीडित महिला रहेका छन् ।
नेपाली महिला कसरी पु-याइन्छ त्यहाँ ?
– नेपालका गाउँ–गाउँमा दलालहरु पसेर सोझा साझा महिलालाई विभिन्न प्रलोभन देखाउने गर्छन् । उनीहरुले हामी विना खर्च कामका लागि कुवेत पठाइदिन्छौं भन्दै विभिन्न सपनाहरु बाँड्ने गरेको र त्यस्तो भ्रममा परेर महिलाहरु दलालको सञ्जालभित्र छिर्ने गरेका छन् । उनीहरुले भारतीय र अन्य विभिन्न बाटो हुँदै कुवेतस्थित मेनपावर कम्पनीलाई ती महिलाहरु जिम्मा लगाउँछन् । कुवेतको मेनपावर एजेन्सीसम्म नेपाली महिला पु¥याए वापत नेपाली दलालले प्रति महिला डेढ लाख रुपैयाँसम्म पाउँदै आएका छन् । त्यसरी पुगेका महिलालाई मेनपावर एजेन्सीले एकै ठाउँ जम्मा गरेर राख्छ र घर मालिकहरुले गाईवस्तु खरिद गरे सरह छानी–छानी महिलाहरु दुई लाख रुपैयाासम्ममा खरिद गरेर लैजान्छन् । एजेन्सीले उनीहरुको तलब लगायतको विषयमा घर मालिकसँग सम्झौता गरेपनि उनीहरुको अवस्था’bout उक्त एजेन्सीले दोहो¥याएर कहिल्यै अनुगमन गर्ने र बुझ्ने काम गर्दैन् । घर मालिकले सय दिनको परीक्षण कालकोरुपमा महिला खरिद गरेका हुन्छन् । चित्त बुझ्दो काम नगरे र भनेको नमाने वा अन्य कारणले ती महिला सय दिनभित्र एजेन्सीमा फिर्ता भए एजेन्सीले घर मालिकलाई उक्त पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ सय दिनका अवधि कटेर महिला फर्के एजेन्सीले घर मालिकलाई रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । र, ती फर्केका महिलालाई एजेन्सीले पुनः अर्काे घरमा विक्री गर्छ । हामीले एउटै महिला ८र९ पटक बेचिएकोसम्म फेला पारेका छौं । कति महिला हराइरहेका पनि छन् ।साँच्चै भन्नु पर्दा भेडाबाख्रा किनबेचको खेलजस्तै हुन्छ, हाम्रा चेलीको ।
तपाईले त्यहाँको वास्तविक विवरण बताउनु भयो तर यस्तो अवस्था रोक्नलाई के पहल भइरहेको छ ?
– महिलामाथिको यातना र हिंसाका कारणले हामीले गत तीजको अवसर पारी ५ मिटर सेतो कपडाको व्यानरमा ‘जबसम्म नेपाल–कुवेत सरकारबीच श्रम सम्झौता हुँदैन, तबसम्म नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा कुवेतमा जान प्रतिबन्ध लगाइयोस्’ भनी लेखेर सम्पूर्णको हस्ताक्षर गरी नेपाल सरकारलाई बुझायौं । सोही कारण चारमहिनादेखि गल्फ कन्ट्रीमा घरेलु कामदारको रुपमा जान नेपाली महिलालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
नेपाल सरकारले के गरेको खण्डमा यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् ?
सबैभन्दा पहिला त नेपाल–कुवेत सरकारबीच घरेलु कामदारको रुपमा राख्ने विषयमा श्रम सम्झौता भएमात्र रोजगारी र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ । कुवेतस्थित दुतावासले ३ र ३ महिनामा महिला कामदारहरुको हाजिरी बुझाउने व्यवस्था गर्न लगाउन नेपाल सरकारले निर्देशन दिए अवस्था केही सहज हुन्छ । त्यस क्रममा उनीहरुले घरबाट बाहिर आउने र आफ्नो समस्या राख्न सक्ने थिए । हामीले दूतावासलाई पत्राचारलाई हराएको महिलाहरुलाई खोजी हाजिरी गराउन ध्यानाकर्षण गरेका छौं । पीडितहरुलाई दूतावाससम्म पु¥याई क्षतिपूर्ति दिलाएर नेपाल फर्काउन पहल गर्दैै आएका छौं । नेपाली दिदीबहिनीलाई मेरो एउटै नम्र निवेदन छ– नेपाल सरकारले गल्फ कन्ट्री श्रम सम्झौता नगरेसम्म घरेलु कामदारको रुपमा तपाईहरु कुवेत लगायतका गल्फ कन्ट्री नजानुहोस्, दलालको ललाई–फकाईमा नपर्नुहोस् ।
प्रसंग बदलौ, कुवेतमा तपाई आफु चै के गर्नुहुन्छ ?
– झापाको तत्कालीन अर्जुनधारा–६ फुलबारीमा जन्मी हुर्की मेचीनगर–२ धुलावारीमा घर भएपनि रोजगारीको सिलसिलामा म २० बर्षअघि कुवेत पुगेको हुँ । अहिले पनि रोजगारीसँगै आफ्नै व्यवसाय गर्दैछु । रोजगारी र व्यवसायका अलावा एनसीसी कुवेतको अध्यक्षको हैसियतले त्यहाँका नेपालीलाई संगठिन गर्ने तथा उनीहरुमाथि परेको समस्या समाधानको पहल गर्दै आएको छु ।
Source: Rojgarmanch.com – Nepal national daily
This entry was posted in अन्तर्वार्ता, अरब विशेष. Bookmark the permalink.